Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Iyada oo leh BMK, Dunida Dalxiiska Afrika ayaa luntay Giant
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Warka Safarka Safarka • Uganda War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Dr. BulaimuMuwanga Kibirige, oo loo yaqaan BMK
Runtii, Eebbaa iska leh annaguna waannu u noqon doonnaa Eebbe ayay ahayd farriintii markii Madaxweynaha Uganda General Yoweri TK Museveni uu aqoonsaday waxtarka cajiibka ah ee Dr. Bulaimu Muwanga Kibirige, oo sidoo kale loo yaqaan BMK. Wuxuu hanti badan u dhisay Afrika iyo warshadaha safarka iyo dalxiiska. BMK wuxuu ku geeriyooday isbitaal ku yaal Nairobi isagoo ka tagay xaasaskiisa iyo 18 caruur ah.
Dr. BulaimuMuwanga Kibirige, oo sidoo kale loo yaqaan BMK, ayaa ku geeriyooday subaxnimadii Sebtember 10, 2021 Isbitaalka Nairobi ka dib markii uu muddo dheer la dagaallamayay kansarka qanjirka 'prostate' oo markii ugu horreysay la ogaaday 2015.
BMK wuxuu dhashay 2-dii Oktoobar, 1953-kii, wuxuu ahaa nin iskiis wax u baray, iskiis u sameeyey oo ka soo kacay wiil yar oo dugsiga ka baxay kadib toddoba-dugsi hoose si uu uga ganacsado aabihii dhintay iyo lataliyaha marxuum Xaaji Cali Kibirige si uu uga mid noqdo ganacsatada ugu hantida badan uguna sumcada badan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba.
Wuxuu ahaa Guddoomiyaha BMK Group ee shirkadaha iyo ganacsade ku guuleystay abaalmarin leh mid ka mid ah silsiladaha huteelka iyo sumcadaha ugu caansan gobolka oo ay ku jiraan 233-qol oo 4-star Hotel Africana ah oo ah goobta la doorbiday kulamada iyo aqoon isweydaarsiyada magaalada Kampala ee faanka ee xarunta shirarka oo leh awood fadhiga 3,500 ergo iyo aqallada BMK.
Kooxda martigelinta ayaa sidoo kale maalgashi ku leh Moroto oo ku taal Waqooyi -bari Uganda iyo Hotel Africana Lusaka Zambia.
BMK waxay kaloo maalgelisay hantida maguurtada ah, qalabka dhismaha, qaybinta mootooyinka, iyo xafiisyada sarrifka lacagaha ee Uganda, Kenya, Tanzania, Dubai, Rwanda, Japan, iyo Zambia.
BMK waxay sidoo kale aasaastay raacitaanka Boda Boda - erey u sii jeeday qaamuuska Ingiriisiga Cambridge oo macnihiisu yahay "baaskiil ama mooto loo isticmaalo taksi ahaan loogu qaado rakaab ama alaab."
Waxa kale oo uu ka shaqeeyey Miiska Wareegtada Maal -gashadayaasha Madaxweynaha (PIRT), oo ah gole gaar ah oo loogu talagalay ganacsatada waaweyn ee uu hoggaaminayo Mudane Madaxweyne, kaas oo dawladda kala taliya sidii loo hagaajin lahaa jawiga maalgashiga ee dalka.
Xilalka kale ee uu hayey waxaa ka mid ah Xubin hore oo ka tirsan Guddiga iyo Guddoomiyaha Cutubka Uganda ee Ururka Waqooyiga Ameerika ee Uganda (UNAA) iyo Guddoomiyaha Sanduuqa Samatabbixinta Unugga Sickle Cell Uganda.
Waxaa la guddoonsiiyay doctorate of Philosophy in Humanities oo ka tirsan Kuliyadda Qalinjebinta ee United iyo Seminary.
BMK sheekadeeda waxaa ugu wanaagsan in looga sheekeeyo buugiisa “My Story of Building A Fortune in Africa”.
Waxaa la bilaabay Maarso 2021 isagoo xanuunsan, waxay ka sheekaynaysaa in kasta oo ay jiraan caqabado xagga nolosha ah, haddana wuxuu ku guuleystey inuu sameeyo oo hanti ka dhiso Afrika.
Sannadkii 1982-kii, markii uu safar ganacsi oo ugu horreeyey ku tegi lahaa Japan, ganacsade BMK wuxuu shandad ku buuxiyay US $ 52,000 wuxuuna raacay diyaarad isaga oo sii maraya Hong Kong. Hong Kong, waxay ahayd inuu baddalo duulimaadyada lugta ugu dambeysa ee safarkiisa.
Intii uu ku jiray safkii miiska laga soo galo madaarka, wuxuu hoos u dhigay shandaddiisii ​​isagoo sugaya waqtigiisa si uu u helo kaadhka raacitaanka.
Tuug ayaa shandadii qabsaday oo sida ugu dhakhsaha badan u orday. BMK ayaa ka dhawaajiyay qaylo -dhaanta inta uu awoodo laakiin taasi ma joojin karto tuugga markii uu ku dhuuntay gegida dayaaradaha.
Lacagtiisii ​​oo dhami way baxday. Baasaboorkiisa, sidoo kale, mana uusan awoodin inuu u gudbo Japan. Waxaa la doonayay in dib loogu masaafuriyo Uganda halkaas oo xabsi loo diri lahaa ama xitaa la dili lahaa.
Wuu cararay wuxuuna bilaabay inuu ku noolaado masaafuris Nairobi isagoo lagu tuhmay inuu ku hawlanaa falal qaran dumis ah hantidiisa darteed.
BMK wuxuu ka sheekeeyaa noloshiisa isagoo la shaqeynaya xubnaha qoyskiisa, ganacsiyo ka aasaasay dalal badan, iyo daqiiqadihii ugu farxadda badnaa noloshiisa - qorshayaashiisa kooxda BMK iyo waxa uu u malaynayo in qof kasta oo danaynaya inuu dhiso hanti 40 -ka sano ee soo socda uu u baahan yahay samee.
Isagoo ku bogaadinaya harada BMK, Madaxweynaha Uganda, General Yoweri TK Museveni, wuxuu lahaa sidan: “Waxaan tacsi u dirayaa qoyska Dr.Hajji Bulaimu Muwanga Kibirige (BMK), qaraabada, saaxiibbada ganacsiga, iyo sama-jecelyaasha.
“Dr. Bulaimu weligiis ayaa lagu xusuusan doonaa kaalintii cajiibka ahayd ee uu ka qaatay dhisidda maalka Uganda iyo Afrika. ”
“Naftiisu ha ku nasato nabad waarta,” ayuu yiri Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Dalxiiska Duurjoogta iyo Qadiimiga, Doreen Katusime.
“Geerida Dr. Bulaimu Kibirige ayaa khasaare weyn u ah dalxiiska iyo soo -dhoweynta.
“Wuxuu ahaa hoggaamiye aan caadi ahayn iyo shaqsi leh tayo iyo saamayn qoto dheer.
“Isagoo ah nin weyn oo ka shaqeeya warshadaha, wuxuu u ahaa dhiirigelin weyn dad badan.
“BMK mar walba waa la ixtiraami doonaa oo lagu ixtiraami doonaa guulaha cajiibka ah ee uu gaaray, wuxuuna ka tagayaa dhaxal ay adkaan doonto in lala jaanqaado.”
Astaanta Sawirka: Ronnie Mayanja Shabakadda Qurbejoogga Uganda
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Uganda Hon. Daudi Migereko ayaa yiri: “Waxaa i soo gaaray war murugo leh oo ku saabsan geerida Xaaji Ibraahim Kibirige oo ka tirsanaa BMK Group iyo Hotel Africana.
“Kibirige wuxuu gacan weyn ka geystay soo dhoweynta, dalxiiska, iyo waaxda gaarka loo leeyahay ee Kampala, Uganda, iyo Gobolka Harooyinka Weyn ee Afrika.
“Geeridiisu waxay khasaare weyn u tahay qoyskiisa, bahda dalxiiska, Uganda, iyo Afrika. Waxaan Allaah ugu mahadnaqaynaa kaalintii iyo aasaaskii uu ka tagay. Naftiisu ha ku nasato nabad waarta.
Laga soo bilaabo Ururka Milkiilayaasha Hoteellada Uganda (UHOA) oo uu ka soo noqday guddoomiyihii hore, qoraalka derbiga Twitter -ka waxaa ku qoran: “Dr. BMK wuxuu ahaa astaanta wanaagga, hawlkarnimada, is -hoosaysiinta, wuxuuna wax badan ka qabtay qaybta Martigelinta; waa la tabi doonaa, laakiin dhaxalkiisu wuxuu ku nool yahay UHOA iyo dhammaan meheradaha BMK. ”
“Nabad ku naso saaxiibkay,” ayay tiri Susan Muhwezi (Chairlady). “Dabayaaqadii 2000 -meeyadii markii Guddiga Dalxiiska ee Uganda iyo hawl -wadeennada dalxiiska ay inta badan ku wareersan yihiin cajalad cas si ay u maalgeliyaan bandhigyada sida ITB Berlin iyo WTM London, BMK waxay u adeegsatay saamayntiisa Miisaska Wareegtada Maal -gashadeyaasha Madaxweynaha (PIRT) si ay uga gudubto xafiis -dawladeedyada oo ay u sugto maalgelinta ka -qaybgalka . ”
BMK wuxuu ahaa muslim cibaado badan leh oo loogu magac daray Xajka isaga oo ula jeeday qof muslim ah oo soo xajiyay dhulka barakeysan ee Maka.
Wuxuu ifka kaga tagay 2 xaas - Sophia iyo Xaawo Muwanga - iyo 18 carruur ah.
“Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilayhi Raajicuun” - Runtii, Eebbaa iska leh, xaggiisaana u noqonaynaa.